के सरकारले विप्लवमाथि गरेको प्रतिबन्धको औचित्य पुष्टि गर्न सक्छ ? | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more के सरकारले विप्लवमाथि गरेको प्रतिबन्धको औचित्य पुष्टि गर्न सक्छ ?
जुन शक्तिले एनसेलको ७२ अरबको राजस्व असुलीको मुद्दा उठायो, उसैमाथि प्रतिबन्ध ! जुन शक्तिले भ्रष्टाचार, कालोबजारी, दलाल, तस्करी र कालोबजारीयाको विरोध गर्यो, त्यहि शक्तिमाथि प्रतिबन्ध र दमन ! पक्कै पनि यसको निर्मम समिक्षा भविष्यमा हुने नै छ । आज आएर पुष्टी हुँदै गएको छ कि प्रतिबन्धले समस्याको समाधान भएन । दमन र धरपकडले विप्लव र प्रकाण्डको शक्ति कमजोर भएन ।
मंसिर २३ गते, २०७६ - १५:५८ मा प्रकाशित